theZOMI: Burma News International - May 11, 2013
Burma News International - May 11, 2013
Burmese police personnel detained for concealing seized yaba tablets
Four Burmese police personnel, who hided some amount of yaba stimulate tablets, were detained by the authority in Maungdaw of western Burma adjacent to Bangladesh border.
Three Muslim youths suspected to be residents of Burma (Myanmar) were detained by the Bangladesh police on Thursday, while they were preparing to fly for Saudi Arabia.
Raids carried out by Indonesian police followingathwarted plot to bomb the Myanmar Embassy in Jakarta led to an Islamist cell that raised funds through criminal activities, said Brig- Gen. Boy Rafli Amar,aspokesman for the National Police on Thursday.
First UK law firm opens in Myanmar
Stephenson-Harwood-LLPStephenson Harwood LLP struckayear-long exclusive association with Myanmar firm U Tin Yu & Associates on May 8, making it the first UK firm to enter the domestic market.
A new trading entry between Thailand and Burma was opened this week that links both countries on their southern borders.
Ministry of Education standards don’t help Karenni
A Karenni community based organization has accused the Burma government’s regulation for schools of being to expensive for villagers to comply with.
Govt militia in shooting incident at border tax gates
A soldier from the government’s controlled Border Guard Force (BGF) is alleged to have repeatedly fired his gun ataboat loaded with cement bags atatax gate on the River Moei on the Thai-Burma Border.
Naypyitaw reps visiting Wa today
As tensions surge between the Burma Army and the United Wa State Army (UWSA) due to the former’s continued military campaigns against the latter’s allies, Naypyitaw is sending one of its top negotiators to the Wa capital Panghsang on the Sino-Burmese border today, according to sources on the border.
Because about two third of the refugees in Tangyan Township, Northern Shan State, are children and they cannot return to their villages yet, the IDP aid workers are planning to buildaclassroom and teach them.
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ (၃)ရက်နေ့ ၌ ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မတူပီမြို့ နယ် ဆဘောင်းသဲကျေးရွာ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် Pseudoephedrine ဆေးပြား ကျပ်ငွေသန်း ၅၁၁ ဖိုးခန့် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် များနှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့်အခါ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရန် အတွက် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များ ကရင် ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့၌ ယမာန် နေ့တွင် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်ဟု ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ ပြောခွင့်ရသူ တီမိုသီက ဆိုပါသည်။
ထိုင်ဝမ် ကုမ္ပဏီ ၃၁ ခု မြန်မာ့ဈေးကွက်သို့ ဝင်လာတော့မည်
စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုများ ဖြေလျှော့လာသည့်နောက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာသည့် အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ ၃၁ ခုလည်း ဝင်ရောက်လာရန်ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုရိပ်သာ စီမံကိန်း ထူးကုမ္ပဏီမှ ကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ရင်းနှီးမည်
ထူးကုမ္ပဏီများအဖွဲ့က ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ လူနေခန်းနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာ တို့ပါဝင်သောပြည်ထောင်စု ရိပ်သာ စီမံကိန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထူးကုမ္ပဏီ၏ အကြံပေး ဦးလှဘော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်နှင့် အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ၏ ဒေသများအား အကူအညီများ ပေးရန် သဘောတူထားသည့် အပေါ် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့် ဂျပန်အစိုးရထံသို့ စီမံချက် အဆိုပြုလွှာ (Project Proposal)များ ရေးသား တင်ပြနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တရပ်ကို မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
KIO ဒုက္ခသည်စခန်း အားလုံးမှ မူကြိုဆရာများအား ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပေး
ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့အနီးရှိ ဂျေယန့်(Je Yang) ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် KIO အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ စစ်ရှောင်စခန်းအားလုံးအတွက် မူကြိုကျောင်းဆရာဖြစ် သင်တန်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ ရဲစခန်းမှ ရဲစခန်းမှူး တစ်ဦးနှင့် ဒုရဲအုပ် တစ်ဦး အပါအ၀င် ရဲဝန်ထမ်း ၄ ဦးကို ယာဘဆေးပြား ၆၀၀၀၀ စာရင်းဖျောက်မူနှင့် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ပြုစု စောင့်ရှောက်မည့်သူ မဲ့နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန်လည်း ဆန္ဒ မရှိကြသည့် တော်လှန်ရေး လုပ်လာသူ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ပြုစု စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းမည့် ဂေဟာ တစ်ခုကို ယမန့််နေ့က ကော့စ်ဘဇား( ဖလောင်းချိတ်မြို့) တွင် အုတ်မြစ်ချခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
Last Updated on စနေနေ့၊ မေလ 11 ရက် 2013 ခုနှစ်
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၇ ဦးအား BGF ဖမ်းဆီး
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ ချီဖွေ-လောခေါင်ဇုံနယ် မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မှတ်တိုင်အမှတ် (၆) ဖရဲ (Hpare) စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည် ၇ ဦးကို မေလ ၈ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပန်ဝါအထူး နယ်ခြားစောင့်တပ် (Border Guard Force) မှ ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရသည်။
အမိမြေ အခြေချရေး ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အသင့်ဖြစ်နေ
ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) သည် အမိမြေ အတွင်း အခြေချရန် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ RNDP က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြ တောင်းဆို ထားသည့် အပေါ် (AA) တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက ကြိုဆိုကြကြောင်း ရခိုင်တပ်မတော် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်က ယနေ့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
လနားဇွပ်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲနေ
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ လနားဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲမှုပြဿနာ ကြုံနေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။